Home अन्तर्वार्ता समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिन नदिने प्रयास भएको छ
नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा के गरिरहेको छ ?
काठमाडांै, सुनौली, बुटवल र भैरहवबाट घर फर्किन चाहनेका लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरी घरसम्म ल्याउने काम भयो । ज्यालामजदुरी गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका २९ सय ६६ परिवारलाई दुई चरणमा राहत वितरण गरियो । पर्चा पम्पलेट, पत्रपत्रिकामा सूचना सन्देश, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम गरी घरघरसम्म कोरोना रोकथामको चेतना बृद्धिलाई चैत्रदेखि निरन्तर गरिरहेका छौं । २३ ओटा क्वारेन्टाइन बनाएर बाहिरबाट आएकालाई राख्ने काम भयो । निस्दी गाउँपालिकाको सहकार्यमा शहीद बहुमुखी क्याम्पसमा ५० बेडको आइसोलेसन निर्माण, ११ सय २० भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण, तानसेनमा होल्डिङ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर सकेसम्म समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनेमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । कोरोनाको कहरमा दीर्घरोगी र ८५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई घरमै पुगेर औषधी वितरण र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिने काम भयो ।
नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या र अन्य क्षेत्रको सहयोग कस्तो छ ?
नगरपालिकामा १३४ कोरोना संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो समय समुदाय र स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी, बैंक तथावित्तीय संस्था, नेपाल प्रहरी र उद्योग व्यवसायीबाट राम्रो सहयोग मिलेको छ । कोरोना कोषमा आर्थिक सहयोगदेखि समुदाय स्तरमा चेतना बृद्धि गर्ने उल्लेख्य सहभागिता छ । समुदायस्तर कोरोना सचेतना भए पनि डराउन छाडेको वा लापरवाही बढेकोले त्यसको रोकथाम जटिल बनेको छ ।
नगरपालिकाले कोरोना रोकथाममा कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च ग-यो ?
नगरपालिकाले १ करोड ५६ लाख असार मसन्तसम्म कोरोना रोकथाममा खर्च गरेको छ । नगरका योजनाको रकमन्तार, कोरोना कोषमा प्राप्त सहयोग, प्रदेश सरकारको १५ लाख, केन्द्रीय सरकारको ४ लाख ७८ हजार सहयोगसहित विभिन्न स्रोतबाट खर्च गरिएको छ । ठूलो खर्च क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत वितरणमा भएको छ । स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाउने तर रिर्पोट आउन ढिला हुने गर्दा ४० दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बाध्यता भयो । स्वास्थ्यकर्मीसहित अग्र भागमा खटिनेको लागि प्रोत्सान भत्ता दिने निर्णय भए पनि अझै भुक्तानी गर्न रकम अभावले सकिएको छैन ।
नगरपालिकाले कोरोना प्रभावितको व्यवस्थापन कसरी गर्दै छ ?
समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिननदिने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था परिचालन गरेर शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई निगरानी बढाइएको छ । कोरोना रोकथाममा यस आर्थिक वर्षमा १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाको मारमा परेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाकाका लागि स्वरोजगार गतिविधि गर्न युवा स्वरोजगर कार्यक्रममा २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । २ सयभन्दा बढीले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
कोरोनाले प्रभावित भएको विकास निर्माणका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने, खानेपानी, सडक जस्ता पूर्वाधार विकासमा रोकिएका काम अगाडि बढाउने र कोरोना कहरसँगसँगै नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने योजना छ ।
प्रस्तुति: किरण कौशल
गोविन्दबहादुर राउत, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड - January 9, 2021 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - January 15, 2021 0
खेल एजेन्सी - January 15, 2021 0
भर्खरै महेश्वर गौतम - January 12, 2021 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - January 11, 2021 0
सुजीतकुमार झा - March 19, 2020 0
एजेन्सी - April 29, 2020 0
प्रदेश २ सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनमा नयाँ कीर्तिमान बनायो : प्रभु साह
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - November 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद प्रभु साहले प्रदेश २ सरकारले बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको कीर्तिमान बनाएको आरोप लगाएका छन्...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - January 2, 2021 0
Breaking News राजधानी समाचारदाता - March 18, 2020 0
Editor-Picks प्रशान्त वली - June 25, 2020 0
बिचार नगेन्द्रराज पौडेल - January 12, 2021 0
प्रदेश २ एम के माझी - January 11, 2021 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - January 14, 2021 0
प्रशान्त वली - January 10, 2021
Editor-Picks निराजन पौडेल - January 14, 2021 0
Editor-Picks कौशिला कुँवर - January 13, 2021 0